Spain enweghị mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Spain enweghị mmiri
Monica sanchez | | Oké ọkọchị
N’afọ a anyị na - ahụ otu ihe kachasị njọ ngbanwe ihu igwe: ụkọ mmiri ozuzo. Ọ bụghịzi na ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu, ihe na-etinye oke ọhịa anyị n'ihe egwu, mana na mmiri anaghị ezo dị ka o kwesịrị. Ọdọ mmiri na-agwụ n'ihi mmiri, ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ agbanweghị n'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịnwe ọnwụ na ntinye gị.
Oké ọkọchị anyị na-ata ahụhụ, ọkachasị n'ebe ugwu nke peninshula, Ọ bụ nke kachasị njọ nke dị na mba ahụ kemgbe afọ 25.
1 Kedu ọnọdụ nke ọdọ mmiri?
2 Ihe si na mmiri pụta
Kedu ọnọdụ nke ọdọ mmiri?
Osimiri dị n'okpuru 50%. Ugbu a, anyị bi na mba mmiri na-agụ. Na Duero Basin, ha erughị 30%, mgbe afọ gara aga n'oge a ha nọ gburugburu 60%. Osimiri Guadalquivir dị na 40%, Júcar na 30% na Segura na 18%.
Osimiri Miño na Sil, bụ ndị a kwakọbara nke ọma ugbu a, nọ n'ọnọdụ mberede: oke mmiri ozuzo na mpaghara ahụ agbadala n'etiti 25 na 30% na nkezi na afọ 40 gara aga.
Ihe si na mmiri pụta
Obere mmiri ozuzo na mmụba nke okpomọkụ, yana mmụba nke ọnụọgụgụ (ọkachasị njem nleta) bụ isi ihe kpatara mbelata mmiri a site na mmiri. Mana, n'otu ụzọ, nke a bụ ihe enwere ike ibu amụma. Anyị nwere otu mmiri na-ekpo ọkụ nke ukwuu, oge ọkọchị na-ekpo ọkụ ma kpọọ nkụ nke dịgidere ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite ọnwa Ọktọba n'ọtụtụ ebe dịka mpaghara Mediterenian.
Mmiri ozuzo yiri ka ọ chọghị ịbịa, nke O meela ka obodo 60 dị na Castilla y León bute mmiri dị oke ọnụ ahịa na nnukwu ụgbọ mmiri, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 na Guadalajara na Cuenca. Na mgbakwunye, enwere mpaghara dị na La Rioja, na Sierra Sur de Sevilla, na Axarquía nke Malaga, na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke León, etiti etiti Ourense na n'ọtụtụ obodo dị na Extremadura nke ike ọkụ na-emetụta. Ma, ọ bụghị naanị ihe ndị a na-esi na ya apụta.
Mgbe mmiri zosịrị jupụta na apiti mmiri juru, osisi hydroelectric na-emepe oghere mmiri iji mepụta ike. Nke a na - eme ka ọnụ ahịa rịa ala; kama, mgbe mmiri na-enweghị, ụlọ ọrụ na-ekpebi mgbe ha ga-ewepụta ume, nke na-ebulite ụgwọ ọkụ eletrik.
Maka ugbo na anu ulo unwu ala bu oke nsogbu. Na-enweghị mmiri, ma ahịhịa nwere ike itolite ma ọ bụ anụmanụ enweghị ike ịda.
Ọ fọdụrụ naanị ichere ka mmiri zoo. Ikekwe n'ọdịnihu nke mkpụrụ nke igwe ojii mmiri ozuzo nwere ike idozi nsogbu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Spain enweghị mmiri
Tito Erzo dijo
Na obodo m, Ecuador, ọkachasị na Mpaghara m Manabi, anyị na-ahụ mmezigharị nke oge a kara aka, nke na-emetụta ihe niile oge oge na etu mmiri ozuzo siri sie ike, ebe ha dị mkpụmkpụ ma dịkwa obere. Omume a na-emetụta mpaghara anyị, ọkachasị na ngalaba ọrụ ugbo, yana ịnye mmiri maka ị ga-eri ihe ndị mepere emepe.
Zaghachi Tito Erazo
The kasị ihunanya n'akụkụ meteorology
Oghere dị na oyi akwa ozone na-adịgidezi maka oge mbụ